Umgangatho weNdibano yePCB-iPandawill Technology Co, Ltd.
IPandawill inenkqubo yolawulo emiselweyo eqinisekisa umgangatho wayo yonke imveliso ngamanyathelo enkqubo. Inkqubo yolawulo lomgangatho ibandakanya ukukhethwa kwabanikezeli ngeempahla, ukuhlolwa kokuqhubeka komsebenzi, ukuhlolwa kokugqibela kunye nenkonzo yabathengi.
Ulawulo loMgangatho ongenayo
Le nkqubo kukulawula ababoneleli, ukuqinisekisa izinto ezingenayo, kunye nokusombulula iingxaki zomgangatho ngaphambi kokuba kuqale indibano.
Ezi nkqubo zibandakanya:
> Uluhlu lokujonga uluhlu lwabathengisi kunye nokuvavanywa kweerekhodi ezisemgangathweni.
> Ukubeka iliso kulawulo lomgangatho weepropati ezihloliweyo.
Le nkqubo ilawula indibano kunye nenkqubo yovavanyo ukunciphisa ukwenzeka kweziphene.
> Ukuphononongwa kwangaphambili kwesivumelwano: kuvavanyo lweenkcukacha, iimfuno zokuhanjiswa, kunye nezinye izinto zobugcisa nezeshishini.
> Uphuhliso loMyalelo woLungiso: isiseko sedatha ebonelelwa ngabathengi, isebe lethu lobunjineli liya kuphuhlisa uMyalelo wokuGcina wokugqibela, ochaza ezona nkqubo zokwenza kunye neetekhnoloji ezisetyenziselwa ukuvelisa imveliso.
> Inkqubo yoLawulo lweMveliso: landela imiyalelo yokuvelisa kunye nemiyalelo yokusebenza ukuqinisekisa ukuba yonke inkqubo yokuvelisa ilawulwa ngumgangatho. Oku kubandakanya ukulawulwa kwenkqubo kunye nokuvavanywa kunye nokuhlolwa.
Uqinisekiso lomgangatho oluphumayo
Le yinkqubo yokugqibela ngaphambi kokuba imveliso ithunyelwe kubathengi. Kubalulekile konke ukuqinisekisa ukuba ukuthunyelwa kwethu akunaziphene.
> Ukuphicothwa komgangatho wokugqibela: yenza uhlolo olubonakalayo nolusebenzayo, qinisekisa ukuba iyahlangabezana nenkcazo kunye neemfuno zabaxhasi.
> Ukupakisha: ukupakisha ngeengxowa ze-ESD kwaye uqiniseke ukuba iimveliso zipakishwe kakuhle xa zihanjiswa.